Indawo entle yokuhlala ePorto Heli - I-Airbnb
Indawo entle yokuhlala ePorto Heli
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguYiannis
UYiannis ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Intle kwaye intle indlu ebekwe ePorto Heli
Indlu ibekwe kwindawo ezolileyo kakhulu kodwa kwangaxeshanye indlu ikwimizuzu emi-5 kuphela ngemoto ukusuka kwiziko lezibuko lasePorto Heli kwaye ulwandle olusondeleyo luyimizuzu emi-2 kuphela ngemoto.
Indlu yindlu eyahlukileyo kwisakhiwo kwaye ikumgangatho ophantsi wayo, njengoko ubona kwiifoto. Kumgangatho wokuqala wesakhiwo kulapho ndihlala khona kodwa igadi kunye nendawo yebbq isetyenziswa kuwe kuphela.
Indlu inamagumbi amabini atofotofo. Eyokuqala inebhedi yenkosi kwaye eyesibini iibhedi ezingatshatanga ezi-2 kunye nebhedi yomntwana. Omabini amagumbi okulala axhotyiswe nge-aircondition kunye neekhethini.
Sikunika iibhedi ezicocekileyo kunye neetawuli.
Kukho ikhitshi eligcweleyo elinetafile nezitulo ezi-6 kwaye kwigumbi lokuhlala kukho isofa kunye ne tv.
Kukwakho indawo yebarbeque egadini enetafile enkulu eyenziwe ngamaplanga apho unokupheka khona.
Indlu inomyezo omhle kakhulu we-2000 square metres.
iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.78 · Izimvo eziyi-27
Ubumelwane bulungile kakhulu kwaye bungqongwe zezinye izindlu ezimbalwa kuphela.. Ke yeyona ndawo igqibeleleyo kwaye yeyona ndlela ilungileyo yokonwabela ukuhlala kwakho ePorto Heli naseGrisi!!
Umbuki zindwendwe ngu- Yiannis
Hello there i'm Yiannis and i'm always here for you. Don't hesitate to contact with me for any question you may have!
Nantoni na oyifunayo ngexesha lokuhlala kwakho ndiya kuhlala ndifumaneka ngoncedo. Nditsalele umnxeba okanye undithumelele i-imeyile kwaye ndiza kuba lapho kuwe!
Inombolo yomthetho: 00000456765
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Porto Cheli